Tag: amara | Martech Zone
Monday, March 20, 2017 Satọde, Febụwarị 10, 2018 Douglas Karr
Ọnwa iri na abụọ gara aga abụrụla ndị kachasị na azụmaahịa anyị. Anyị wegharịrị akwụkwọ Martech anyị, bugharịrị ọfịs anyị ka afọ 7 gachara, wee jiri obi eziokwu wughachi ọrụ anyị site na ala. Ekpebiri m ịhapụ nzukọ n'oge afọ iji lekwasị anya na azụmahịa. N'ezie, emeghị m njem na Florida n'oge niile, ebe m hụrụ ezumike na ileta mama m anya. (Obi adịghị mama m ụtọ na ihe a bụ eziokwu.)